SONATA-CANTATA: ဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ - Draftswoman
Draftwoman ဘ၀က စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
နေဦးလေ ။ အလုပ်လုပ်နေတုံး ရည်းစားရ ပြီးမှ အလုပ်ထွက်ရမှာ လေ ။ အခုက အဆင့်ကျော်သွားတယ်။
အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ ပုံဆွဲတာ ၀ါသနာပါတယ်လေ။
ပုံဆွဲကာစက ရှပ်ပြာပြာနဲ့ power point ကို ceiling layer မဖျောက်ပဲ သွားတပ်မိလို့ အဆူခံရတာမှတ်မိသေးတယ်။
ကောင်းတယ် သီတာရေ.. ဆက်ရေးပါဦး.. အတွေ.အကြုံတွေပေါ့။ တွေ.ဆုံခြင်းအကြောင်းလေးလည်း ချန်မထားခဲ့နဲ့ဦးနော်.. ဟဲဟဲ
ကျနော်လည်း ဘန်ကောက်မှာ အလုပ် လုပ်တုန်းက AutoCAD 10 နဲ့ CAD Operator အလုပ် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ GIS Map တွေ ဆွဲတာပါ။ ခုတော့ အားလုံးမေ့ကုန်ပြီ။
မနေ့တုန်းက ရွှေဝါမြေကနေ ၀ယ်လာတဲ့ ရီရီသန့် ကာရာအိုကေအခွေကြည့်ဖြစ်တယ်။ “တကမ္ဘာလုံးသုံးစွဲတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတောင်မှ အဖိုနဲ့အမ နှစ်ကိုယ်အလှည့်ကျ” ဆိုတဲ့ နေရာရောက်တော့ သတိရမိလို့ ပြုံးရသေးတယ်။ ကျနော့်မှာ အဲသည်စာဖတ်ပြီးတော့ ကိုဧရာကတော်ကို လျှော့တွက်မိတာ အခုတော့ အမှားကြီး မှားနေပြီပေါ့။
အဲ…လျှော့တွက်မိတာဘဲဆိုလို့ တခါတည်း သတိရလို့ ပြောပြရဦးမယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အဲသလိုဘဲ လျှော့တွက်မိတဲ့အကြောင်းကိုပါ။ (တော်တော် လူတွေကို လျှော့တွက်တတ်သူပါတကားလို့ အထင်ခံရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့)။
ကျနော် စင်္ကာပူရောက်စအချိန်၊ ကိုဧရာတို့ ဇနီးမောင်နှံအိမ်(ဘဲဒုတ်ကအိမ်)ကို ရောက်ခဲ့စဉ်က အဖြစ်အပျက်ပါ။ ကိုဧရာတို့အိမ်မှာ အတူနေတဲ့ မိတ်ဆွေ တယောက်ဆီကို ဖတ်ဘို့ စာအုပ်တွေ လာပေးစဉ်ကပေါ့။ ကျနော်ယူသွားတဲ့စာအုပ်တွေမှ အန်တီစုရေးတဲ့ စာအုပ်တွေလည်းပါတယ်။
အဲသည်အချိန်မှာ ကိုဧရာနဲ့ ကိုဧရာ ကတော်က စားပွဲမှာ ထမင်းစားရင်း စာအုပ်တအုပ်အကြောင်းကို အသည်းအသန် ဆွေးနွေးနေတယ်။ ကျနော်က ဘာစာအုပ်လဲလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မင်းသိင်္ခရဲ့ ၀တ္ထုဖြစ်နေတယ်။ “ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား” ထင်ပါရဲ့။
အဟဲ….ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ “အမယ်မင်း…. ဖတ်စရာရှားလို့” ဆိုပြီး တဖက်သတ် လျှော့တွက်လိုက်မိသေးတယ်။ (ကြည့်ဦး….ဘယ်လောက်မကောင်းတဲ့ ဧည့်သည်လဲဆိုတာ။ ရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်ကျွေးတဲ့ ရေခဲမုန့်ကိုမှ အားမနာ။)
အခုမှ ဒီဇနီးမောင်နှံရဲ့ လက်ရာကောင်းတွေကို ဖတ်မိတော့မှ “တကယ်ရှော်တာ ကျနော်ပါ” ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာတော့တာကိုး။
ဒါကြောင့်ပြောတာနေမှာ။ ဘာမဆို အလျင်စလို ကောက်ချက်မချကြဘို့ ဆိုတာလေ။
မ ရေ… ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်… ဘ၀ရဲ့မှတ်တိုင်လေးတွေပေါ့…
အကြီးမားဆုံးမှတ်တိုင်ကြီးတော့ ကျော်မသွားနဲ့ နော်…
ကျွန်မ ခဏခဏရေးဖို့စဉ်းစားတဲ့ စံပြမိသားလေး အကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလေး ဖတ်ချင်လို့ ပါ…
ရေးဖို့ ကြံတိုင်း ကိုယ့်ဆရာကိုဧရာ မျက်နှာပြေးမြင်ပြီး အမှားပါမှာကြောက်လို့ အဲဒီပို့ စ် ခုထိ မတင်ဖြစ်တာသာကြည့်…
ကိုပေါတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ကို (အငယ်တန်းတွေလို့ရေးရင် အတန်းတူ သူငယ်ချင်းတွေကို မလေးစားသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့) အစ်မတို့ထက် mature ဖြစ်တယ်လို့ ကြုံဆုံလာတိုင်း ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရှိကြတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပေါ်လွင်တယ်။
တစ်ဆင့် သိကျွမ်းခင်မင်ရတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ စတွေ့ဖူးပြီးတဲ့ အချိန်ကတည်းက ခင်မင်ပါတယ်။
နောက် မဒမ်ပေါကို တွေ့ရတော့လည်း ခင်တာပဲ။
landscape ပါ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ အားကျတယ် ခင်ဗျ။ ကျွန်တော် အဲဒီအပိုင်းကို သေချာ မလေ့လာခဲ့မိဘူး။ အခုထိတော့ လုပ်ဆို လှအောင်တော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို မသိခဲ့ဘူး။ နောက်ဆို အဲဒီအပိုင်းတွေ လာပြီး အကြံဥာဏ် တောင်းမယ်နော်။
အစ်မကိုသင်ပေးတဲ့ Auto CAD ဆ၇ာကအခုဘယ်မှာလဲ? သင်တန်းလေးတက်ချင်လိုပါ
July ရေ အစ်မက ဘာနေရာမှ အားကိုးလို့ မရပါဘူးကွာ..ဒါပေမဲ့ တကယ်လိုအပ်ခဲ့ရင်တော့..စာတွေထဲ ၀ိုင်းကူရှာပေးပါမယ်။
Life is for Success ရေးသူရေ
အစ်မတို့ကို သင်ပေးတဲ့ ဆရာက အခု မြန်မာပြည်မှာ မရှိတော့ပါ။ သင်တန်းနေရာကတော့ SoftGuide Computer ၁၉လမ်း လသာမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့ပါ။